(SAWIRR+WARBIXIN) Xiriirka kubad cagyaraha Puntland oo labo ciyaartooy oo reer Puntland ah ku daray xulka Soomaaliya u matalaya koobka aduunka ee cag yaraha. | puntlandi.com
Sunday, September 10th, 2017 | Posted by Pi
(SAWIRR+WARBIXIN) Xiriirka kubad cagyaraha Puntland oo labo ciyaartooy oo reer Puntland ah ku daray xulka Soomaaliya u matalaya koobka aduunka ee cag yaraha.
Xiriirka kubad cag-yaraha Puntand (Puntland Mini football Federation), ayaa ku guulaystay inay labo ciyaartoy oo kasoo jeeda Puntland ku daraan xulka kubada cagta Soomaaliya ee ka qeyb galaya koobka aduunka ee kubad cag yaraha oo dhowaan ka furmaya dalka Tunisa.
Tartankaan oo ah markii labaad oo la qabanayo, ayaa Soomaaliya waxay markii ugu horeysay oo ay tartankaan ka qeyb galayso, iyagoo ku guruub ah, Brazil, Rushia iyo Bosnia, waana arrin taariikhda u galaysa xiriirka kubad cag-yaraha Soomaaliya.
Gudoomiyaha xiriirka kubada Cag-yaraha ee gobolka Mudug Abdiqani Carabay ayaa Sheegay in ay guul u tahay in aan fursad wanagsan siyaan labo ciyaartooy oo ka mid ah ciyaartooysa Puntland gaar ahaan gobolka mudug ay ka mid noqdaan Qaranka Soomaaliya ee Somali Mini Football Kana qeyb galaan tartanka World Mini Football.
Waa markii koowaad ee ciyaartooy Puntland ka socota ay xirtaan funanada qaranka Somalia ee Somali Mini Footbal, Maadaama ay helin dhalinyarada sports Puntland gaar ahaan kubada cagta inay ciyaaro caalami ah ay saftaan waa mid la oraan karo taariikh iyo fursad wanagssn u tahay dhalinyarada Puntland.
Sida aan la socono isboortiga Puntland wuxuu hormuud u yahay isboortiga Soomaaliya, sidaas awgeedma dhalinyaradiisa laacibiinta ma helaan fursadaha ay helaan dhalinyarada koonfurta Soomaaliya oo la og yahay in ay sanad walba matalan magaca qaranka Somalia ee kubada cagta oo ay guul darro kala kulmaan tartamada is reeb reebka qaarada Africa iyo world cup.
Abdiqani carabey oo ka.mid ah shaqsiyaadka mar walba ka shaqeeya hormarka isboortiga Puntland ayaa kaalin wanagsan ka qaatay sidi ay uga mid noqon lahaayn dhalinyarada Sports Puntland tartamada kubada cag yaraha world mini football, Hadana u wado diyaar garowgii dhalinyarada fursada u helay qaranka Somalia ee Somali Mini Football Maxamed faarax iyo Abdullaahi Mangala.
Waa mid la oran karo xirirka Somali Mini football waxay ka soo baxeen wajibaad kooda in ay dhalinyarada dhamaan gobolada fursad siyaan si loo helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo matala qaranka Somalia ee Somali Mini Footbal.
Gaba gabadii ayaa gudoomiyaha xirirka kubad cagayaraha Somali Mini football gobolka mudug sheegay in ay jiraan bisha December tartanka jamacadaha carabta ay fursad kale ay u abuurayaan dhalinyarafa Puntland si loo muujiyo dhalinyarada sports xirfadooda .
“Waxana fariin u dirayaa xirirada isboortiga Puntland iyo kuwa Somalia inay fursad siyaan dhalinyarada ciyaaraha puntland si ay uga faaiideystaan jaaniskooda xirfadeed, waana hubaa inay ka faaiideysanayaan dhalinyarada Puntland ee kubada cagta ciyaara haddi la siiyo fursadaha.Xulka Qaranka Somalia oo ay helaan kuwa koonfurta la siiyo.” ayuu yiri Abdiqani Carabay.